3 weriye oo maanta lagu xiray Hargeysa, caawana u beryey xabsiga dhexe ee Hargeysa. – Radio Daljir
Hargeysa, Sept 08 – Ciidanka bilayska Somaliland ayaa maanta xabsiga u taxaabay 3 weriye oo ka tirsan warbaahinta Somaliland.
3-da weriye ayaa ku sugnaa xarunta baarlamaanka ee Hargeysa oo maanta uu ka dhaxay gacan ka hadal dhex marary mudanayaasha baarlamaanka oo isku maandhaafay 2 mooshin oo la hor keenay golaha.
Khadar Maxamed Cakuule oo u shaqeeya TV-ga Universal, Maxamed Ibraahim Sagax oo u shaqeeya wargeysaka Haatuf, iyo weriye kale oo u shaqeeya mid ka mid ah warbaahinta Internka.
Weriyayaasha la xiray ayaa goobjoog ka ahaa buuq maanta ka dhashay fadhigii golaha wakiilada oo qaar ka mid ah mudanayaasha uu dagaal ku dhex maray, sababayna in markii dambe la xiray fadhigii golaha.
Waa markii 2-aad ee dhawrkii maalmood ee la soo dhaafay la joojiyey fadhiga golaha, ciidanka bilayskuna ay gudaha u galeen fadhiga golaha, lana bannaday hawlihii golaha wakiilada Somaliland.
Sidoo kale, agaasimaha idaacada Horyaal Maxamed Cismaan Mire ayaa maalintii 5-aad ku xiran xabsiga dhexe ee Hargeysa.
Ciidanka CID-da Hargeysa ayaa xiray agaasimaha, kana qabtay aqalka baarlamaanka.
Wax dambi ah laguma eedayn agaasimaha, aan ka ahayn in idaacada Horyaal ay baahisey war aanay jeclaysan xukuumada Somaliland.
Dambiga keliya ee ay galabsadeen weriyayaashu ayaa ah in ay tebiyaan hawlaha fadhiga golaha, ayna bulshada u gudbiyaan qaab-dhaqanka ciidanka bilayska iyo xukuumada.